Yala National Park ~ Journey-Assist - mahaliana. Photo. Overview. Ahoana no hahatongavana any
Pejy fandraisana » Eran-tany / Faritra » Asia » Sri Lanka » Fampahavian'i Sri Lanka » Yala Park
Yala National Park (atsimon'i Sri Lanka)
Hatramin'ny ora fiasana. Mandritra ny alina
Nikatona ny zaridaina isan-taona
Ny vidin'ny fitsidihana sy manofa trano ze
Ahoana ny fomba mankany Yala Park
Fitsipika momba ny fiarovana ary toro-hevitra alohan'ny hitsidihan'i Yala Park
Toetoetran'ny Yala Park (sary fijery + sary)
Yala no tahiry nasionaly malaza indrindra any Sri Lanka.
Manodidina ny 300 km ny halaviran-dry zareo mankany Colombo.
I Yala dia hita ao amin'ny faritra somary maina any atsimo atsinanan'ny faritany Uva.
Ny faritry ny zaridainan'ny zaridaina dia zaraina amin'ny bara 5 ary mahatratra 979 metatra toradroa. km.
Yala Park Map
Inona no mahaliana eo amin'ny zaridainan'i Yala
Ny ankamaroan'ny fitsangatsanganana amin'ny zaridaina dia manomboka amin'ireo tanàna akaiky azy - Kataragame sy Tissamaharama.
Ny tena mahasarika an'i Yala dia ny leopards, izay hita eto amin'ny isa marobe ary mety ho hita mandritra ny safidin'ny zotra iray.
Eto ianao dia afaka mahita karazam-boninkazo, elefanta, serfa, orsa, karazam-borona, voanjo, gidro, vorona sy biby mandady.
Satria misy biby be dia be ao amin'ny zaridainam-panjakana, dia mandeha dia voarara!
Yala Park. Andian’omby amin'ny elefanta
Alan'i National Lanka (Yala Park)
Yala Park fanokafana
Misokatra mandritra ny fitsidihana fito andro isan-kerinandro ny Yala Nature Reserve, afa-tsy ny fotoana fanakatonana fanao isan-taona. Ny ora fiasana dia avy ka hatramin'ny 6 ka hatramin'ny 18 ora.
Ny fitsangantsanganana amin'i Yalu dia tafiditra ao anatin'ny vondrona mpizahatany ao anaty sambo iray misy torolàlana azo atao amin'ny andiany 3:
Amin'ny maraina hatramin'ny 6 ka hatramin'ny 12.
Amin'ny hariva manomboka amin'ny 12 ka hatramin'ny 18.
Mandritra ny andro 6 ka hatramin'ny 18.
Mandritra ny alina any Yala Park ao amin'ny Eco Camping
Azonao atao ihany koa ny mandany teti-bola miaraka amin'ny safari iray ao amin'ny zaridainam-panjakana, ao anatin'izany ny mandany ny alina ao amin'ny toeram-piompiana ekoloana manokana izay mipetraka mivantana ao amin'ny faritry ny zaridaina.
Eco Camping any Yala Park
Ny fanakatonana isan-taona an'i Yala Park
Nikatona isan-taona i Yala noho ny fitsidihana efa ho iray volana. Matetika indrindra ny fanidiana dia amin'ny volana septambra na Oktobra. Ny daty fanakatonana manokana ho an'ny taona ankehitriny dia nambaran'ny sampan'ny departemantan'ny Wildlife nandritra ny volana maromaro.
Ny vidin'ny fitsidihana an'i Yala Park
Ny vidin'ny fitsidihana ny valan-javaboary dia ahitana ny vidin'ny tapakila fidirana, ny habetsaky ny saram-pandraisana ary ny vidin'ny hofan'ny jip. Raha tsy misy ny mpitari-dalana sy fiara iray, mahafaty an'i Yala no mahafaty.
Ny tapakila fidirana amin'ny olon-dehibe dia mitentina $ 25 (fandoavana amin'ny volan'i Sri Lankan)
Ho an'ny ankizy latsaky ny 6 taona - $ 7 (fandoavana amin'ny volan'i Sri Lankan)
Ny fanofa trano Jeep amin'ny zaridainan'i Yala
Ny fanofaanan-tsoavaly antsasaky ny andro - 40 $
Ny fanofaan'ny zotra rehetra - 75 $
Mampiditra olona 6 ny goavambe.
Avy any amin'ireo tanàn-dehibe lehibe indrindra ao Sri Lanka mankany amin'ny Yala National Park dia mety ho tratran'ny fiara fitaterana:
Manomboka ao Colombo ka mankany Yalu
Avy any Colombo ka hatrany Yala Park dia azo aleha amin'ny bus bus 32 "Colombo - Kataragama."
Mandritra ny 8 ora izany.
Misy fiara fitateram-bahoaka 27 ao amin'io lalana io isan'andro, misy ny sasany no manam-pihetsika.
Mandeha ihany koa ny laharam-bisy 3 avy any Colombo mankany Kataragama, na izany aza, mandeha indray mandeha ihany izy io. Naharitra 7,5 ora ny dia.
Avy any Negombo ka mankany Yalu
Ny laharana bus 270/228/3 dia mankany Kataragama amin'ny Negombo.
Misy fiara 2 mpandeha isan'andro amin'ity làlana ity.
Tsy misy mpamily rivotra. Naharitra 8 ora ny dia.
Avy any Galle mankany Yalu
Mba hahatongavana any Yala avy any Galle dia mila maka ny bus bus 32-6, izay mandeha amin'ny lalana "Elpitiya - Kataragama",
na mandeha anaty bus No. 2/26/32 mankany Matara, ary alao mankany amin'ilay zotra mankany Yala avy hatrany ny aotobisy.
Avy amin'i Matara mankany Yalu
Eo amin'ny lalana "Matara - Katagarama" mitondra bus bus 333. Tsy misy fandraisana an-tanana ao. Mitaky 3,5 ora ny dia. Misy fiara bus 3 isan'andro.
Misy koa bus number 334-1, manaraka ny lalana "Matara - Kataragama". Mandritra ny 1 andro dia fiara fitateram-bahoaka 1 fotsiny no mandroso amin'ity sidina ity.
Avy amin'i Kandy mankany Yalu
Bus No. 10 Kandy-Kataragama dia manaraka mivantana any Katagarama sy Tissamaharama. Avy amin'ireto toeran-kafa ireo dia ny fitsangatsanganana dia manomboka mivantana amin'i Yalu.
Avy any Trincomalee mankany Yalu
Bus isa 27/218/49 manaraka ny lalana Trincomalee - Hambantota mamakivaky an'i Tissamaharama sy Katagarama.
Afa-bitan'ny rivotra io bus io.
Ny ampahany amin'ny lalana dia mandeha eo amin'ny valan-javaboarim-pirenena roa - Lunugamwehera sy Yala.
Bus 1 monja isanandro no mandeha amin'io sidina io.
Naharitra 11 ora ny dia.
Fitsipiky ny fiarovana rehefa mitsidika an'i Yala Park
Voarara ny mpitsidika:
Fitsidihana ny zaridainam-panjakana irery, tsy an-kiato miaraka amin'ny mpitari-dalana.
Nitsidika ilay zaridainam-panjakana mandeha an-tongotra (navela anaty zotra fotsiny aza).
Famahana ny biby ao amin'ny zaridainam-panjakana.
Ny sakafo (raha tsy ny faritra voafaritra manokana ao amin'ny zaridainam-panjakana). Ny fofom-tsakafo dia manintona bibidia izay mivelona amin'ny zaridaina.
Mampiasa finday manana feo mandeha. Io feo io dia afaka mampatahotra biby masiaka be, manolana azy ireo.
Sary momba ny tselatra. Ny tselatra fakan-tsary dia afaka mampatahotra sy tezitra amin'ny bibidia koa.
telefaonina: + 94 112 888 585
Of. Tranonkala Yala Park: https://www.yalasrilanka.lk/
Ampisehoy ny sari-tanety ho an'ny fanamoriana: https://g.page/yalasrilanka?share
Yala Park amin'ny sarintany